Fariinta Ciise, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Waa maxay fariinta Ciise Masiix?
Injiilku waa warka wanaagsan ee ku saabsan furashada xagga nimcada Ilaah ee ku saleysan rumaysadka xagga Ciise Masiix. Farriinta ayaa ah in Masiixu u dhintay dembiyadeenna aawadood, in la aasay, oo la sara kiciyey maalintii saddexaad ka dib Qorniinku, ka dibna wuxuu u muuqday xertiisii. Injiilku waa warka wanaagsan ee aan ku gali karno boqortooyada Ilaah iyadoo loo marayo shaqada badbaadada ee Ciise Masiix (1 Korintos 15,1: 5-5,31; Falimaha Rasuullada 24,46:48; Luukos 3,16: 28,19-20; Yooxanaa 1,14:15; Matayos 8,12:28,30) -31; Markos XNUMX: XNUMX-XNUMX; Fal XNUMX:XNUMX; XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Ciise wuxuu yidhi in ereyada uu ku hadlay yihiin ay yihiin erayada nolosha (Joh 6,63:3,34). “Waxbaristiisuna” waxay ka timid Ilaaha Aabbaha ah (Yn 7,16; 14,10; XNUMX), oo waxay ahayd rajadiisa in ereyadiisu ku rumaystaan ​​rumaystaha.
Yooxanaa, oo ka badbaaday rasuullada kale, wuxuu lahaa kuwan soo socda si uu wax uga sheego waxbarista Ciise: “Kii dhaafa oo aan ku sii jira cilmiga Masiixa, Ilaah ma leh; ku alla kii ku sii jira cilmigaan wuxuu leeyahay aabaha iyo wiilkaba ”(2Joh 9).
"Laakiin maxaad iigu yeedhaysaa Sayidow, Sayidow, oo ha yeelin waxa aan kugula hadlayo," ayuu yidhi Ciise (Lukos 6,46: 2). Sidee Masiixiyi u sheegan karaa inuu isu dhiibey xukunka Masiix isagoo iska dhega tiraya ereyadiisa? Masiixiyiinta, adeeciddu waxay ku wajahan tahay Rabbigeenna Ciise Masiix iyo injiilkiisa (10,5 Korintos 2: 1,8; XNUMXTh XNUMX).
Masiixu wuxuu ku bilaabanayaa wacdiga dusheeda (Mt 5,1 7,29; Luukos 6,20 49) isagoo sharraxaya dabeecadaha ruuxiga ah ee ay tahay in kuwa raacsan ay aqbali karaan. Faqiirka ruuxiga ah ee ay taabanayaan dhibaatada dadka kale ilaa xad ay gaarto; kuwa camalka qabow oo gaajaysan oo u naxa caddaaladda, naxariis badan oo qalbi daahir ah, kuwa nabadda jecel oo la silciyo caddaalad aawadeed - dadka noocaas ahi waa hodantinimo iyo barako, iyagu waa “cusbada dhulka” oo ay ammaanta Aabaha jannada dhexdeeda (Mt 5,1: 16-XNUMX).
Ciise ayaa markaa isbarbardhigaya tilmaamaha Axdiga oo dhan (waxa loo sheegay kii hore) waxa uu ku odhanayo kuwa rumaysta isaga (“laakiin waxaan kuu sheegayaa”). Xusuusnow tirooyinka isbarbar dhiga ee Matayos 5,21: 22-27, 28-31, 32-38, 39-43, iyo 44-XNUMX.
Wuxuu ku soo bandhigayaa isbarbardhigaan isagoo leh inuusan u imaan inuu jebiyo sharciga, laakiin inuu fuliyo (Mt 5,17:3). Sida looga wada hadlay Daraasadda Baybalka 24,44, Matayos wuxuu adeegsanayaa ereyga "oofin" qaab wax sii sheegid ah, ma aha macnaha "qabashada" ama "indho indhaynta". Haddii Ciise fulin waayey warqad kasta oo yar iyo dhibic kasta oo ballamaha Masiixa ah, markaa wuxuu noqon lahaa been abuur. Wax kasta oo sharciga ku qoran, nebiyadii iyo Qorniinka [sabuurrada] ku saabsan Masiixa waa in ay noqdaan kuwo sii sheegid ah xagga Masiixa (Luukos XNUMX:XNUMX).
Anaga ahaan, hadalada Ciise waa lama huraan. Wuxuu ka hadlayaa "amarradan" ee Matayos 5,19:XNUMX - "kuwan" waxay la xidhiidhaan wixii uu bari lahaa, oo ka soo horjeedda "kuwa" la xidhiidha amarradii hore loo soo sheegay.
Walaacdiisu waa udub dhexaadka caqiidada Masiixiyada iyo adeecida. Isaga oo adeegsanaya isbarbardhig, Ciise wuxuu ku amrayaa kuwa raacsan inay adeecaan hadalkiisa halkii ay raadin lahaayeen qodobbada Sharciga Muuse oo aan ku filneyn (barida Muuse ee ku saabsan dil, sino, ama furniinka Matayos 5,21: 32-5,33), ama aan khusaynin (barista Muuse ee ku saabsan dhaarta) ee Mt 37-5,38), ama ka soo horjeedda aragtidiisa suuban (Muuse wuxuu barayaa ku saabsan caddaaladda iyo dhaqanka ku wajahan cadaawayaasha Mt 48-XNUMX).
Matayos 6, Eebaheena, oo "qaabeeya qaabka, nuxurka, iyo ujeedada ugu dambeysa ee iimaankeena" (Jinkins 2001: 98), wuxuu sii wadaa inuu kala saaro Masiixiyiinta iyo diinta.
Naxariista dhabta ah [sadaqadu] ma muujineyso howlaheeda wanaagsan si ay u hesho amaan, laakiin waxay u adeegtaa si iskaa ah (Mt 6,1: 4-6,5). Salaadda iyo soonku laguma muujiyo astaamaha guud ee cibaadada, laakiin waxay ku dheehantahay is hoosaysiin iyo caqiido rabitaan (Mt 18-6,19). Waxa aan rabno ama aan gaarno ma aha ujeeddada ama welwelka nolosha kaliya. Waxa muhiimka ah waa in la raadiyo xaqnimada uu Masiixu bilaabay inuu sharraxo cutubkii hore (Mt 34: XNUMX-XNUMX).
Wacdinta waxay si xoog leh ku dhamaanaysaa Matayos 7. Masiixiyiintu waa inayan ku xukumin kuwa kale iyagoo xukumay maxaa yeelay iyaguna waa dambiilayaal (Mt 7,1: 6-7,7). Ilaaha Aabbeheenna ah wuxuu rabaa inuu nagu barakeeyo hadiyadaha wanaagsan iyo ujeedada ka dambeysa khudbadiisa ee oday-yaasha sharciga iyo nebiyadu waa inaan ula dhaqano kuwa kale sida aan jecel nahay in loola dhaqmo (Mt 12: XNUMX-XNUMX) ).
Nolosha Boqortooyada Eebbe waa in la sameeyo doonista Aabaha (Mt 7,13: 23-7,24), oo macnaheedu yahay inaan dhageysanno oo aan yeelno ereyada Masiixa (Mt 17,5:XNUMX; XNUMX: XNUMX).
Ku rumeynta caqiidadaada wax kale oo aan ahayn khudbadaada waxay la mid tahay inaad guri ku dhisato ciid ciidda dumiya markay duufaantu dhacdo. Rumaysadku wuxuu salka ku hayaa khudbadaha Masiixu waa sida guri dusheed lagu dul dhisay, aasaas adag oo u adkaysan kara tijaabooyinka wakhtiga (Mt 7,24: 27-XNUMX).
Waxbaristu waxay argagax ku noqotay dhagaystayaashii (Mt 7,28: 29-5,20) maxaa yeelay sharciga Axdiga Hore waxaa loo arkay aasaaskii ay Farrisiintu ku dhisteen xaqnimadooda. Masiixu wuxuu dhahay in kuwa raacsan ay sii socdaan oo ay caqiidadooda isaga u dhisaan keligiis (Mt 5:32,4). Masiixu, maaha sharciga, waa dhagaxii uu Muuse ku heesay (Deut 18,2; Sab 1; 10,4 Korintos 1,17). Waayo, sharciga waxaa loo soo dhiibay Muuse. nimcada iyo runtu waxay ka yimaadeen xagga Ciise Masiix ”(Yooxanaa XNUMX:XNUMX).
Waa inaad mar labaad dhalataa
Halkii lagu kordhin lahaa sharciga Muuse, oo laga filaayey rabbaaniyiinta (macallimiinta diinta Yuhuudda), Ciise wuxuu baray wax ka duwan sidii wiilka Ilaah. Wuxuu ka dhiidhiyay mala-awaalka daawadayaasha iyo awoodda macallimiintooda.
Isaguse wuxuu sii waday inuu sheego: Qorniinka waad baadhaysaa sababta oo ah waxaad u malayn inaad nolosha weligeed ah ka dhex helaysaan, Oo iyana waa aniga markay ii marag furayso; laakiin ma dooneysid inaad ii timaado inaad nolosha leedahay ”(Yooxanaa 5,39: 40-1). Si sax ah u tarjumida Axdiyada Hore iyo Axdiyada Cusub ma keento nolosha weligeed ah, in kasta oo ay yihiin waxyooday inay naga caawiyaan fahamka badbaadada iyo muujinta iimaankeenna (sida looga hadlay Daraasadda XNUMX). Waa inaan u tagnaa Ciise si aan u helno nolosha weligeed ah.
Ma jiro il kale oo badbaadada laga helo. Ciise waa "jidka, iyo runta iyo nolosha" (Yooxanaa 14,6: XNUMX). Ma jiro wado loo maro aabaha marka laga reebo wiilka mooyee. Badbaadadu waxay la xiriirtaa xaqiiqada inaan u nimid qofka loo yaqaan Ciise Masiix.
Sideen ugu tagnaa Ciise? Yooxanaa 3, Nikodemos wuxuu u yimid Ciise habeenkii si uu wax badan uga baro waxbarashadiisa. Nikodemos wuxuu argagaxay markii Ciise ku yidhi: "Waa inaad mar kale dhalataa" (Yoona 3,7: XNUMX). Nikodemos ayaa weyddiiyey, "Sidee taasi u suurtoobi kartaa? Hooyadeen ma mar kale baa ina dhalan kartaa?"
Ciise wuxuu ka hadlay isbadal xagga ruuxa ah, dib u dhalasho cabir ka sarreeya, oo ka dhashay "kor", oo ah tarjumaad dhameystiran oo ah erayga Griiga "mar labaad" qaybtan. "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in kuwa isaga rumaystaa oo aan lumin laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah" (Yooxanaa 3,16:5,24). Ciise wuxuu ku sii waday ereyada: "Kii ereygayga maqla oo rumaysta kii i soo diray, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah" (Yoon XNUMX:XNUMX).
Waa xaqiiqo aaminaad. Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu yiri qofka rumeeysan wiilka wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah (Jn 3,36:1). Rumaysadka Masiixu waa bilowga “yaan dib looga dhalan roga oo aan laga noqosho shahwada tabar daran (1,23 Pt XNUMX), bilowga badbaadada.
In la rumaystaa Masiixa micnaheedu waa in loo qaaddo in Ciise yahay "Masiixa, Wiilka Ilaaha nool" (Mt 16,16:9,18; Lk 20: 8,37-6,68; Fal 69:XNUMX), "oo leh ereyo nolosha weligeed ah" (Joh XNUMX-XNUMX).
In la rumaysto Masiixa micnaheedu waa in loo qaaddo in Ciise yahay Ilaah kan
Jidhku wuxuu noqday wuuna dhex noolaaday (Yooxanaa 1,14:XNUMX).
waxaa iskutallaabta lagu qodbay xaggiisa "si nimcada Ilaah uu u dhadhamiyo geeri dhimashada" (Cibraaniyada 2,9: XNUMX).
"Wuu u dhintay wax walba, in kuwa halkaas sii noolaanayaa aysan sii noolaan doonin, laakiinse ay kuwa dhintay u dhinteen iyaga aawadood" (2 Korintos 5,15).
"Dembigu mar buu dhintay dhinaciisa" Rooma 6,10:1,14) iyo "taas oo aan ku leennahay madaxfurasho ah, kaas oo ah cafiska dembiyada" (Kolosay XNUMX:XNUMX).
“Waa dhintay oo wuu soo noolaaday isagoo madax u ah kii dhintay iyo kuwa noolba” (Rooma 14,9).
"Kan midigta Ilaah fadhiya, oo jannada kor u fuulay, malaa'igaha iyo kuwa xoogga badan iyo kuwa xoogga badanna isagay hoos yimaadaan." (1 Pt 3,22).
Isaga “kor loogu qaaday samada” wuuna “soo noqon doonaa” intuu “jannada kor u aaday” (Falimaha Rasuullada 1,11:XNUMX).
“Wuxuu xukumi doonaa kuwa nool iyo kuwa dhintayba muuqaalkiisa iyo boqortooyadiisa” (2 Timoteyos 4,1: XNUMX).
"Waxay ku noqon doonaan dhulka si ay u helaan rumaystayaasha" (Yooxanaa 14,1 4).
Anagoo ku aqbalayna Ciise Masiix rumaysad sida uu isagu naftiisa u muujiyey, waxaynu "dib u dhashay".
Toobad keena oo la baabtiiso
Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu ku dhawaaqay: “Toobad keena oo injiilka rumaysta” (Mk 1,15)! Ciise wuxuu baray in isagu, Wiilka Ilaah iyo Wiilka Aadanaha, “uu leeyahay awood uu ku cafiyo dembiyada dhulka ku yaal” (Mk 2,10:9,6; Mt XNUMX). Taasi waxay ahayd injiilka Ilaah u soo diray wiilkiisa si loo badbaadiyo dunida.
Toobad keena [toobad keena] ayaa lagu soo daray farriintan ku saabsan badbaadada: "Waxaan u imid inaan u yeedho dembilayaasha oo aan kuwa xaqa ah ka dhigin" (Mt 9,13:3,10). Jahwareerka kasta oo Bawlos ku dhex jira ayaa Bawlos ku caddeeyey: “Ma jiro mid xaq ah oo aan xabbad lahayn mooyaane (Rooma XNUMX:XNUMX). Dhammaanteen dembiilayaal bay Masiixu u baahan yahay toobadkeen.
Toobaddu waa baaqa in loo laabto xagga Eebbe. Kitaab ahaan, insaanku wuxuu ku jiraa xaalad ka go'naan xagga Ilaah. Si la mid ah wiilka ku jira sheekada wiilka cibaadada leh ee ku sugan Luukos 15, rag iyo dumarba way ka fogaadeen Ilaah. Sida ku cad sheekada, aabaha wuxuu ka walwalaa inaan ku laabanno. Isaga fogaanta aabaha waa bilowga dembiga. Su'aalaha dembiga iyo mas'uuliyadda masiixiga waxaa looga hadli doonaa daraasadda Baybalka mustaqbalka.
Sida keliya ee aabaha loogu celin karaa aabbaha waa wiilka. Ciise wuxuu yiri: “Aabbahay wax walbaba waa i siiyay; oo ninna wiilka yaqaan ma jiro aabo keliya; oo qofna aabaha garan maayo inuu yahay wiilka kaliya iyo kii wiilku doonayo inuu u muujiyo ”(Mt 11,28:XNUMX). Bilowga tawbadkeenku waa inaan ka leexanno dariiqooyinka kale ee la garanayo ee badbaadada oo aan u leexanno xagga Ciise.
Aqoonsiga in Ciise yahay Badbaadiye, Sayid iyo Boqorka Imaatinka waxaa caddeeya xafladda baabtiiska. Masiixu wuxuu ina baray in xertiisu lagu baabtiiso “magaca Aabaha iyo kan Wiilka iyo kan Ruuxa Quduuska ah”. Baabtiisku waa muujinta dibedda ah ee waajibka gudashada ee raacitaanka Ciise.
Matayos 28,20:XNUMX, Ciise wuxuu sii waday: “... bar iyaga inay dhawraan wax kasta oo aan kugu amrayey inaad ku samaysaan. Oo bal eega, anigu waan kula joogaa maalin kasta ilaa dhamaadka dunida. Inta badan tusaalayaasha Axdiga Cusub dhexdiisa, waxbarista ayaa ku xigta baabtiis. Ogsoonow in Ciise si cad u sheegay inuu isagu amarradiisa noogu soo hadhay, sida lagu sharxay Wacdinta Buurta.
Toobaddu waxay ku sii socotaa nolosha rumaystaha markay u soo dhowaato Masiixa. Sida Masiixu leeyahay, isagu weligiis wuu nala jiri doonaa. Laakiin sidee? Sidee buu Ciise innagula joogi karaa oo sidee buu tawbadkeen macno leh u dhici karaa? Su'aalahan waxaa looga jawaabi doonaa koorsada xigta.
Ciise wuxuu sharxay in ereyadiisu yihiin ereyo nolosha oo ay ku rumeeyaan rumaystaha isaga oo u sheegaya isaga ama iyada jidka badbaadada.